Andranomanelatra-Antsirabe Il: Fiara nivadibadika, roa no maty
vendredi, 04 janvier 2019 23:06
Fiara kely Peugeot 307 iray avy any Antananarivo no nivadibadika sy niala ny lalampirenena faha-7, tsy lavitra ny toby mpaninjara solika Shell tao Andranomanelatra Antsirabe faharoa, androany zoma 4 janoary harivariva, ka nahafatezana zatovo lahy roa.
Raha ny fanazavana azo avy tamin’ny lehiben’ny Zandary tao Andranomanelatra dia nifanena tamin’ny fiara avy aty Antsirabe ireto nandeha fiara kely ireto, ka nisy fiara niala lavaka hifanena sy saika hifatratra tamin’izy ireo, ary dia niala izany ilay fiarakely ka nivadibadika tany amin’ny sisin-dalana.
Voalaza fa nipitika tao anaty fiara mihitsy ireo zatovo niisa telo mianadahy tao anatiny, fa ny mpamily ihany no tavela tao anatiny satria nifatotra ny "ceinture de sécurité". Noho ny dona mafy nahazo ny lohan’ireo roalahy izay mpinamana moa dia maty izy ireo rehefa tonga tany amin’ny hopitaly, fa mbola tsaboina kosa ilay zavavay iray amin’izao fotoana.
Avy nanao fitiliana ara-pahasalamana tany an-drenivohitra ireto zatovo ireto no izao tra-doza izao.
iaraha-mahalala anefa fa ratsy ny RN7 iny amin’izao fotoana ka ilana fitandremana.
Eto moa no ampahatsiahivana hatrany ny tokony amatorana ny "ceinture de sécurité" ho an'ny rehetra mandeha fiara na tsy mpamily aza, satria izy ireny dia manavotra amin'ny tampoka toy izao.